नेपाल आज | चिनीयाँ अनुदानको खोप भन्दा ढुवानी महगो
चिनीयाँ अनुदानको खोप भन्दा ढुवानी महगो
सरिता सिंह (जुनि) बिश्वलाई कोरोना महामारीको उपहार दिएको चीनले अब औसधि वितरण गरेर पाकिस्तान जस्तै अन्य देसलाई आफ्नो तर्फ खिचने तयारी गरेको छ । अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रण, गरिवी निवारण र व्यापार–वाणिज्य प्रवर्द्धनका लागि चीनले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसँग विभिन्न संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । ध्यान रहोस चीनले बिभिन्न देशमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराउने रकम तिर्न न सके पछि जमिन सहित कब्जा व लिज लिन बाध्य भएका छन । पाकिस्तानको गुलाम कस्मिर र अहिले हालसालै श्रीलंकाको एयरपोट तेसको उदाहरण रहेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले वुधबार दक्षिण एसियाली मुलुकका समकक्षीहरुसँग गरेको भिडियो सम्मेलनमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरे तर अहिले नेपालको असल छिमेकी हो १ बर्स बाटो किन बन्द गरेको हो । चीनबाट शुरु भएको कोरोना महामारी सचिक्कै चीनले नियन्त्रण गरेको हो भने अहिले सम्म नेपाललाई किन सहयोग गरेन के यहि हो छिमेकीको जिम्मेवारी । चीनको सिमानाका बन्द अर्बौंको मालसामान बर्बाद भएको ब्यापारीहरुमा रुवाबासी छ भने अहिले आएर सहयोगमा गर्ने प्रतिबद्धताको अर्थ सहजै बुझ्न सकिन्छ । तर नेपाल सरकारलाइ ब्यापारीको समान बर्बाद होस कुनै मतलब नगरेको हो । यहि बेला कोरोनाको महामारीको बहानामा किन सिमा नाक बन्द गरेको हो भन्नू हिम्मत हुनु पर्ने हो । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भाग लिएका थिए ।तर सिमानाका र ब्यापारीको बारेमा एक शब्द किन बोलेनन् ?
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले चीन–दक्षिण एसिया आपत्कालीन आपूर्ती भण्डारण संयन्त्रण निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । कोरोना महामारीका बेला पहिलो चरणमा आएको कोरोना भाइरस किटहरु खरिदमा भएको भ्रष्टाचार नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । यहि भारतको प्रदेश राजस्थानमा समेत बेचेको थियो तेहा राज्य सरकारले पछि प्रतिबद्ध लगायो । यसको उद्देश्य खोप लगायत अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको भण्डारण गर्ने र संकटमा परेका देशलाई उपलब्ध गराउने हो । यो प्रस्ताव गरेको काम शुरु कहिले हुने थाहा छैन नेपालीहरु चीनबाट शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण दिनहु ज्यान गुमाउँदै छ्न । सहयोग गर्ने स्थाम सयन्त्रको नाममा राजनीति शुरु भएको हो । चीनको सहयोग भावना भए सबै बढी प्रभावित भारतलाई , भुटान बाइपास गरेर मानवताको हैन भनेर बुझ्न जरुरी छ । किन भारत मा जे हुन्छ तेस्को असर सिधै नेपालमा पर्ने गरेको छ । नेपाल भारत सिमानाका प्रशासनको कुनै पनि सयन्त्रले रोक्न सक्दैन । नघ र मासु सम्बन्ध जस्तै हरेक दिन लाखौंको संख्या विभिन्न काममा भारत नेपाल् आउम जान बाध्य छ्न ।
सो भण्डारण केन्द्र समुद्रको नजिक बनाउन बंगलादेशले प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनका अनुसार समुद्रको नजिक स्थापना गरिएमा आप्तकालीन अवस्थामा कुनै पनि मुलुकमा छिटो पुर्याउन र प्रयोग गर्न सकिन्छ । अब पाकिस्तान पछि अब बाङ्लादेशलाई पनि जालो हाल्ने काम हो कि ? नेपालमा विभिन्न ठेक्का लिएका चिनियाँ कम्पनीहरुको काम अधुरो नै १ बर्ष भयो किन कोरोना रोकथामको सहयोग नेपाललाई दिएन राजनीतिको पटक पटक ठुलो ठुलो नेता चीनले पठाएको हो तर कोरोना महामारी पछि नेपालको अवस्था बारेमा खसै चासो दिएन चीनले ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले कोरोना खोपमा सहकार्यका लागि एक संयन्त्र नै निर्माण गरेर काम गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चीनले कोरोना खोपका सम्बन्धमा अनुदान, व्यापारीक कारोबार र उत्पादनको क्षेत्रमा सहकार्यका लागि लचिलो रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । अहिले बिश्वमा कोरोना महामारी कहाँ बाट शुरु भएको हो ? कोरोना भाइरस चेक गर्ने किट अनि मास्क कुन देश धेरै बेच्ने मौका पायो । कोरोनाको नाममा सक्क्लि देखि नक्कली किट समेत बेच्ने कुन देश हो ? ई सबै जवाफ खोज्न जरुरी छ ।
खोपका सम्बन्धमा अहिले केही अनुदान दिने केही किन्ने शर्त आयो चीन बिक्रेताको सहजै बिक्री वितरणको काम पाउने बाहेक अरु कुन देशले दिन सक्ने यसको सिधा फायदा चीनलाई हो अहिले चीनको खोप नेपालले ल्याउदा लागत खर्च अनुदानको खोप भन्दा बढी रहेको छ । अब खोप अनुदानमा लिने तर भाडा नै महगो परे अनुदानको कुनै आचित्य छैन । बरु रसिया अमेरिका या अन्य मुलुकबाट मगाउने हो कि ? अब पुनः चीन चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचमा एक सहकार्य संयन्त्र बनाउने र त्यही फ्रेमवर्कमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
एमाले नेता रिजाल भन्छन्– प्रन्या मात्र होईन, पदक थाप्ने पाँचै जनाको वहिर्गमन
विपक्षीलाई ओलीको अर्को प्रहारः वलेसीको पानीका फोका हुन, आफै फुट्छन